ကြှနျုပျတို့အကွောငျး - Ningbo Jiming လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာ Co. , Ltd
အရည်အသွေး & အာမခံ
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး & Development
ဝန်ဆောင်မှု & Support
ဘက်ထရီ Pack ကို & လှေငြိမ်
Exit ကိုသင်္ကေတပြ & Combo
ဖောက်သည်များ '' စိတ်ကျေနပ်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပြီး, စိတ်ရင်းမှန်နဲ့ပူးတွဲစျေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ရှည်လျား-အသုံးအနှုန်းများဖောက်သည်တွေနဲ့တည်ငြိမ်သမဝါယမဆက်ဆံရေးထူထောင်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ပထမဦးဆုံးအတန်းအစားထုတ်ကုန်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုမြန်ဆန်ပေးပို့နှင့်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းနှင့်အတူကျနော်တို့အလွန်အမင်း '' နိုင်ငံခြားဖောက်သည်ကိုခြီးမှမျးအနိုင်ရရှိခဲ့ပါပြီ။
Ningbo Jiming လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာ Co. , Ltd, which was founded in 1967, is an all-round enterprise engaged in development, production, sale and service. There are over 600 people working in our factory. Factory covers an area of 20,000 square meters (215278.21 square feet), facility and production area are 50,000 square meters (538195.52 square feet) totally. Our main product lines are LED Emergency and Security lighting, Exit Sign, Emergency Battery Pack and Emergency Ballast, Rechargeable LED Outdoor and Camping lights, LED Work lights, LED Desk Lamp, Portable Lamps and Flashlights. Our products are widely used in places such as home, office, shopping center, school, warehouse, parking and station as well as for working underground, camping and outdoor.
ထုတ်လုပ်မှု, ရောင်းလိုအားနှင့်ရောင်းအားအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောကွန်ရက်တစ်ခုနှင့်အတူ, Jiming နှစ်စဉ်လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့် USD35,000,000.00 နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကိုအလင်း၏ 5.000.000 အစုံကျော်ရောက်ရှိ။ အဆိုပါပေါင်းစပ် LED အလင်းသတင်းရင်းမြစ်၏နည်းပညာများ, အားပြန်သွင်းနိုင်ဘက်ထရီကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ပြည့်စုံသောပလတ်စတစ်တန်ဆာစွမ်းရည်ကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီများ၏နံပါတ်ဖို့ဝန်ကြီးချုပ်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းစေသည်။
ယနေ့တွင် Started Get!
နေရပ်လိပ်စာ: No.546 Qiye လမ်း, Zhouxiang မြို့, Cixi, Zhejiang, တရုတ်
ဖုန်းနံပါတ်: + 86-135-6655-7272
ဖုန်းနံပါတ်: + 86-574-8738-7582
ဖက်စ်: + 86-574-8738-7580